Samsung's Linux Based Tizen OS Inonzi Security Nightmare
Samsung yave iri kushanda paTizen kwemakore maviri apfuura kuti ave nzvimbo yeIndaneti. Zvisinei, zvinoratidzika kuti basa ravave vachiita harina kuitwa zvakanyanya.
Chii chinonzi Tizen?
Tizen is Linux-based Open source mobile operating system izvo zvave zvakapoteredza makore 5. Pasi 2013, Samsung yakatanga kufambira mberi muTizen nemwoyo wose. Chinangwa chaiva chekugadzira imwe nzira yakakodzera yeAroid.
Samsung inoda kushandiswa kweAroid nekuda kweshamwari yaGoogle-kufanana nevakagadziri vese. Kunyange zvazvo Android inogona kunge yakasununguka uye yakasununguka, mapurogiramu eGoogle anouya pane zvigadzirwa zve Android (uye vatengi havagoni kurarama pasina) vakavharwa. Kana vanogadzira zvinhu vachida kuwana maGoogle apps, vanofanirwa kubatanidzwa neWatch Handset Alliance. Nhengo dzeOHA "dzinorambidzwa zvisingabvumirwi pakuvaka maitiro asina kubvumirwa neGoogle".
Chaizvoizvo, izvi ndizvo zvinonzi neGoogle mune Blog romukova:
Kunyange zvazvo Android ichiripo yakasununguka kune chero munhu angashandisa sezvavanoda, inongova madivayiri e-Android chete anobatsirwa kubva munzvimbo yakazara yeAvironment ecosystem. Nokubatana neWatch Handset Alliance, nhengo imwe neimwe inobatsira uye inovaka imwe yero ye Android-kwete boka rezvinyorwa zvisingabvumirwi.
Saka zvinonyanya kukosha, Samsung inoda nzira yekupfuurira kuita mari kana iine kubuda neGoogle kana Google inongobva.
Zvakawanda Zvokuchengetedza Matambudziko
Kunyange zvazvo Samsung inogona kuva nechinangwa chakanaka, vane basa rakanyanya mberi kwavo. Munguva pfupi yapfuura, Muongorori weIsrael Amihai Neiderman akazarura kuti Tizen izere nezvigaro zvekuchengeteka. Muzvokwadi, akaratidza kuti akanga awana 40 kudzvinyirira kwakange kusingazivikanwe kwaizobvumira mutengesi kutora chikwata uye chikwata chePizen-powered device.
Neidermen akataura, "Ingangodaro ndiyo code yakaipisisa yandakaona. Zvose zvaunogona kuita zvisina kururama ipapo, vanozviita. "
Tsanangudzo yekodhi yekodhi yakatorwa kubva pamitambo yakawanda yeSamente yakapfuura, kusanganisira yekare yaifambisa shanduro yeBada. Zvisinei, yakawanda yeipi yakaipa yakanyorwa mumakore maviri apfuura uye ine zvikanganiso zvaiwanzoita makore makumi maviri adarika.
Imwe yezvinetso zvakawanikwa ndeyekuti Tizen yakavakwa mune app store inoshandiswa pane imwe nzvimbo yepamusoro. Izvi zvinogona kubvumira mutengesi kuti atore code yakaipa kuburikidza nehutano hunoshandiswa. Kunyange zvazvo Tizen ine chirongwa chekuvimbisa chakavakirwa mukati kuti chidzivirire izvi, Neidermen akakwanisa kuwana rimwe dambudziko rakamupa kuti atonge kuti awedzere kutenderera kwehurongwa.
Paivawo nenharo nekutaura kwekutsvaga. Dzimwe nguva SSL yakashandiswa uye dzimwe nguva kwete. Kakawanda, deta yakaendeswa isina kudzivirirwa.
Zvakawanda Zvakakanganisirwa Sei?
Ndinofara, Tizen yakangotarisa kuendesa zvishoma kusvika ikozvino. Kune ikozvino 30 mamiriyoni eTV anoendeswa neTizen, uyewo, mafoni akawanda uye smartwatches. Mazhinji emafoni uye maziso zvakatengeswa muIndia neRussia. PaCES 2017, Samsung yakaronga zvirongwa zvekushandisa imwe nhamba yeIndaneti-yeIndaneti yezvinhu (IoT), kusanganisira Family Hub 2.0 smart friji uye Mushonga Wemagetsi Wokugeza. Tizen inowanikwawo Raspberry PI.
IoT Security Problems (uye Solution?)
Mufananidzo unofadza: Klossner
Sezvo IOT inowedzera zvakanyanya uye yakawedzerwa zvakasimba muhupenyu hwezuva nezuva, kuchengeteka kunofanira kuva chinhu chinokosha. Zvinosuruvarisa, zvuru zvezvikwata zvakazaruka kuti zvirwise. Kudzoka mu2013, chichena chikafu chinonzi zita Billy Rios akawana kuti internet yakabatanidza zvigadzirwa zvemishonga muzvipatara, dzakadai semakumbo emapumpu kana mapurisa emwoyo akanga akazarurirwa kurwisana kubva kune vaseki. Pane imwe nguva, ruzivo rwemurwere 'ruzivo rwakawanikwa pahurukuro yakaoma yeanopa gas analyzer.
Kunze kwekudzivirira kwehuzivi, kunewo kushungurudzika kwekuti vatengesi vanogona kutora zvigadzirwa zvisina kuchengetedzwa zveIoT mumutauro wavo pachavo. Munhu anokanganisa angashandisa iyi tsvina yebhokisi yakaderera kuti atore pasi mawebhusayithi nekuramba kushanda kwebasa, masipiresi akaoma zvikuru ane motokari yakawanda.
Tech mutori wenhau Bob Cringely ane mhinduro kune kutyisidzirwa kwe botnet yeUnT undead. Anokurudzira kugadzira purogiramu yakasiyana iyo inobvumira IoT zvigadziri kutarisana asi dzinoita kuti zvikwanise kupindira kana kunyange kuona inowanikwa yepaIndaneti. Chaizvoizvo, mashoko packets ekuvhiringidza maIoT maikirwo uye yeIndaneti inowanzopfuura, asingazivi kuti kune umwe neumwe. Panova nemapoka mashomanana pakati pemapoka maviri kuti avabvumire kutaura uye kugovana ruzivo, asi kwete kuita chero chakaipa.
Kuti ufananidze Full Metal Jacket, Samsung ine kushanda kwakanyanya pamaoko avo. Vavo vavo veAroid muparadhiso yeparadhiso.
Zvinoratidzika sekuti Samsung iri kutumira zviratidzo zvakasiyana. Vari kuisa Tizen kuti ive yeInternet inoshandiswa pafoni, maziso, uye kupfuura. Asi kune rumwe rutivi, shanduro yavo ichangobva kuzara izere nekushaya simba uye nhamba isina kunyorwa. Zvinoratidzika sekuti vakashandisa zvakadai kune mumwe munhu achigadzira chirongwa chekushanda chavasingakwanisi kutumira kodhi yakakodzera.
Mubvunzo ndewokuti: Vanonyatsoda here kutumira chirongwa chekushandisa kana kuti Tizen inofanirwa kunge iri tsvimbo yekubata musoro weGoogle '?
Somunhu, ndinoda kupa Tizen kuedza nokuti ndinoda kutamba nezvinhu zvitsva, asi ini ndichaisa izvo zvigadzire kwechinguva kusvikira vawana matambudziko emitemo yavo yakagadziriswa.
Wakamboshandisa Tizen here? Iwe unofungei nezveiyi nyaya?
Kana wakawana nyaya iyi inofadza, tapota igoverenge neshamwari dzako nemhuri pane zvese zvaunofarira zvemagariro evanhu.
A new Minecraft: Bedrock Edition chigamba chekuvandudza chiri kutenderera kune vese vatambi
LineageOS 18.1 yakavakirwa Android 11 iri pano kune angangoita makumi matanhatu emidziyo
Nhoroondo ye Android: Iyo shanduko yeiyo hombe nhare mbozha OS munyika